I-chatbot enezilimi eziningi zezakhamizi zase-Afrika, abacwaningi kanye nabenza imigomo ukunikeza izimpendulo ezisheshayo ezungeze i-COVID-19 - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu I-DialogShift ne-AfricArXiv on I-8th Meyi 2020 I-8th Meyi 2020
Isiqalo saseJalimane I-dialogShift kanye nenqolobane yase-Afrika esezingeni eliphakeme yokuqondisa ubugwegwe I-AfricArXiv athuthukise i-chatbot yezilimi ezahlukahlukene yezakhamizi zase-Afrika, abacwaningi kanye nabenza izinqubomgomo ukuhlinzeka izimpendulo ezisheshayo ezungeze i-COVID-19.
Ubhubhane lwe-coronavirus luqede umhlaba ngamandla amangalisayo. Iningi labantu likuthola kunzima ukugcina ukubukelwa phansi kwesimo samanje futhi ngaphezu kwakho konke bakhathazeka ngempilo yabo. Iqembu lesibhedlela saseBerlin AmaVivantes usebenzise i-Covid-19 chatbot kwiwebhusayithi yabo ngoMashi 2020. I-chatbot iphendula imibuzo eyi-1000 ngosuku ngezilimi eziningana (isiJalimane, isiNgisi, isiTurkey, isiRussia kanye nesi-Arabhu) nangehora. I-Artificial intelligence, kuhlangene nethuba lokubuza imibuzo nge-chat, iphendula imibuzo efanelekile ngegciwane, ifanele iziguli ngokusebenzisa uhlelo lochwepheshe futhi inikeze nezincomo ezithile zomsebenzi.
Abasizi abasebenza kahle njengama-chatbots banamandla amakhulu, ngoba atholakala ngo-24/7 futhi baphendula imibuzo eyisisekelo ngezilimi ezahlukahlukene. Ukudluliswa kwemininingwane elula futhi okusheshayo kusiza izakhamizi kanye neziguli, ikakhulukazi kulezi zikhathi zokungaqiniseki.
Olga Heuser, I-dialogshift CEO
I-chatbot ye-COVID-19 inikezela ngemininingwane ngokushesha mayelana nokutheleleka okungenzeka kanye nezimpawu ezijwayelekile nokuthi ulwazi olungeziwe, oluthembekile noluqondene nesifunda lungatholakala kuphi. Ngesikhathi sesigaba sokuqala senyanga eyodwa, sizobhekisisa imibuzo ebuzwa ngabavakashi bethu bewebhusayithi futhi sihambise izimpendulo zayo ngokufanele.
Izingxoxo eziklanyiwe ngesakhiwo ziyizinhlelo ze-dialog ezisebenza njengezindawo zemvelo zolimi lwabasebenzisi bemininingwane nabanikezeli bensiza. Ngokufakwa kwale-chatbot kuwebhusayithi ye-KiaArXiv ithimba lethu lizokwazi ukwenza kangcono ukufinyeleleka okufika ngesikhathi nokwenele kolwazi oluhlobene nokucwaninga kososayensi base-Afrika maqondana ne-COVID-19 nokuthi ungabasiza kanjani kangcono ekwenzeni imiphumela yabo yocwaningo itholakale kwizazi zomhlaba wonke. inkulumo kanye nengxoxo.
Luke Okelo, University of Kenya [I-ORCID iD]
Nge-Natural Language Processing (NLP) isebenzisa i-Google Humusha, i-chatbot iyatholakala ngezilimi ezingaphezu kwe-100 kufaka phakathi isiBhulu, isi-Arabhu, i-Amarinth, isiChichewa, isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiHausa, isiHindi, i-Igbo, isiMalagasy, isiPhuthukezi, isiSuthu, isiSomaliya, iSunda. , IsiSwahili, isiXhosa, isiYoruba nesiZulu. Ngesikhathi sesigaba sokuqala, sizovivinya ukunemba kokuhunyushelwa ezilimini zase-Afrika futhi sifune impendulo kubavakashi bethu ukuze sikwazi ukuthuthukisa ukuhumusha kwezilimi ezisetshenziswa kakhulu kulo mongo. Xhumana nathi uma ungathanda ukusisiza ekungezeni ezinye izilimi zase-Afrika kulolu hlu, noma uma ubeka imibono, imibuzo noma ukukhathazeka.
I-dialogShiftI-Platform ye-AI Conversational ivumela izinkampani nezinhlangano ukuhlanganisa isipiliyoni sokuguqula bukhoma nezokuzenzisa kumadivayisi amaningi futhi ivumela ukuxhumana kwamakhasimende noma komsebenzisi ngemiyalezo noma ukuxoxa (i-bots) ezindaweni ezihlukene zokuthinta.
I-AfricArxiv ingumlando oholwa ngumphakathi wokuxhumana ocwaningweni wase-Afrika. Sinikeza ipulatifomu engenzi inzuzo ukulayisha amaphepha okusebenza, okulungiswayo, imibhalo yesandla eyamukelwe (amaphrinta asemuva), izethulo, kanye namasethi wedatha ngokusebenzisa amapulatifomu esisebenza nawo. I-AfricArxiv inikezelwe ukukhuthaza ucwaningo nokubambisana phakathi kososayensi base-Afrika, ukuthuthukisa ukubonakala kokuphuma kocwaningo lwase-Afrika kanye nokukhulisa ukusebenzisana emhlabeni jikelele.
Categories:	UkubambisanaCovid-19Ezokuxhumana Kwesayensi